တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီက ဖီဂျီနိုင်ငံ သမ္မတအဖြစ် ရာထူးအပ်နှင်းခြင်းခံရသော Katonivere ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့ - Xinhua News Agency
ဖီဂျီနိုင်ငံ ၊ Suva မြို့ ရှိ Jack's of Fiji စတိုးဆိုင် ၏ ဆိုင်ခွဲတစ်ခု၌ တရုတ်မီးပုံးပွဲတော် ပါဝင်ဆင်နွှဲမည့် ကလေးငယ်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဖီဂျီနိုင်ငံ သမ္မတအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော Ratu Wiliame Katonivere ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဖီဂျီနိုင်ငံ၊ Suvaမြို့ရှိ Fijian Holdings Limited စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော တရုတ်ဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖီဂျီနိုင်ငံ၊ Suva မြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေသော ကင်မရာဆရာတစ်ဦးအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖီဂျီနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံသစ်နှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သည့် ပထမဆုံး ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၄၆ နှစ်ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်-ဖီဂျီ ဆက်ဆံရေးသည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပြီး အရွယ်အစား မတူညီသော နှစ်နိုင်ငံအကြား တန်းတူရည်တူဆက်ဆံမှုနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စံနမူနာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် တရုတ်နှင့် ဖီဂျီတို့သည် အတူတကွ ရပ်တည်၍ အချင်းချင်း ကူညီခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့ကြောင်း ရှီက သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်-ဖီဂျီ ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အလွန်အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဘက်စုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖလှယ်မှုများ အားကောင်းလာစေရန်၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ တရုတ်-ဖီဂျီ ဘက်စုံ မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာသစ်များ ဖွင့်လှစ်ရန်၊ သို့မှသာ နှစ်နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများ အကျိုးစီးပွား ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် သမ္မတ Katonivere နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ရှီက သဝဏ်လွှာ၌ ပြောကြားထားသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 13 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Friday sent congratulations to Ratu Wiliame Katonivere on his taking office as Fijian president.
Noting that Fiji was the first Pacific island country to establish diplomatic relations with New China, Xi said that since the establishment of ties 46 years ago, China-Fiji relations have made remarkable progress and becomeamodel of equal treatment and friendly cooperation between countries of different sizes.
Facing the COVID-19 pandemic, China and Fiji have stood together and helped each other, and their friendship and cooperation have been increasingly deepened, Xi said.
Xi said he attaches great importance to the development of China-Fiji relations, and stands ready to work with President Katonivere to strengthen all-round friendly exchanges and practical cooperation between the two countries, open up new broad prospects for China-Fiji comprehensive strategic partnership, so as to better benefit the two countries and their peoples. Enditem